Akụkọ - plantlọ osisi na ụlọ ọrụ ọhụụ bidoro iwube ya
Sichuan XiangYue Ike akara mmiri Cop. (XY Tower) hiwere 2008. Na mbọ nke niile stof, ụlọ ọrụ amalite nnọọ ngwa ngwa. Ahịa anyị na-ọtụtụ ebe si anụ ụlọ na esenidụt, ọtụtụ puku elu na-nyefere ndị ahịa na etinyere China, Sudan na ọtụtụ mba ndị ọzọ.
Site na ịre ahịa anyị na-arịwanye elu, ikike mmepụta enweghị ike izute mkpa nke ndị ahịa anyị. N'ịtụle mgbasawanye nke ahịa, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ kpebiri itinye ego 20,000,000 iji wuo ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọhụụ.
Emere oru ngo a na uzo abuo. Na nke mbụ, a 4500 m2 a ga-ewu osisi na ala ụlọ ọrụ 5. a ga-eme ya na afọ 2021. Na nke abụọ, ọzọ 3000 m2 A ga-ewu osisi Ọ ga-amalite iwu n'afọ 2023. Mgbe emechara ọrụ ahụ, ikike mmepụta kachasị nwere ike iru 50,000 tọn kwa afọ.
Na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Post oge: Mee-06-2020